Wafdi ka socda dowladda oo Dhuusamareeb kula kulay dadka degaanka-SAWIRRO – Radio Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminayo Siihayaha Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mahad Maxamed Salaad iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray magaalada Dhuusamreeb ee xarunta gobolka Galguduud.
Masuuliyiintaan ayaa gobolka u tagay arrimo ay ka mid yihiin tayaynta ciidamada qalabka sida ee ku sugan gobolka iyo dardar galinta maamul u sameynta gobollada dhexe.
Jenaaral Maxamed Jimcaale Rooble Goobaale iyo guddoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye “Cirfo” iyo masuuliyiin kale ayaa meel fagaaro ah kula hadlay dadka Dhuusamreeb ku nool, ayagoo sheegay in dowladdu ay dadka degaanka u qabanayso adeegyo u ugu horreeyo ammaanku, ayagoo ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada.
Ciidamo ku sugan agagaarka Dhuusamareeb ayaa la siin doonaa tababar iyo saanad ciidan, kuwaas oo qeyb ka ah ciidamada XDS sida ay Radio Muqdisho u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan Dhuusamreeb.
Wafdigaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, waxayna masuuliyiintu dadka degaanka ku dhiirri galinayaan sidii ay u sameysan lahaayeen maamul metela dadka ku nool gobollada dhexe. Dowladda ayaa horay guddi farsamo oo taageera siiyaa dadka degaanka u magacowday maamul u sameynta gobolladaasi. Dadaalladaasina wali waxay ka soconayaan gobolladaasi.
Maxamed Cabdi Maxamed, Dhuusamareeb